'Ndiyazi ukuba Kutheni i-Caged Bird Meming' Quotes - Maya Angelou
'Ndiyazi isizathu sokuba iCage Bird Iingcaphuno'
Iincwadi zeMaya Angelou zeNgcaciso zeZigcisa
" Ndiyazi isizathu sokuba i-Bird Cage Ihlabelele ," incwadi eyaziwayo yiMaya Angelou, ngowokuqala kwimiqulu yeencwadana ezisixhenxe zemveli. Le ncwadi iye yathandwa kuba ishicilelwe okokuqala ngo-1969. I-Oprah Winfrey, owayefunde le ncwadi xa wayeneminyaka eyi-15, wathi phambili kwiphepha le-2015 le ncwadi, "... kwakukho ibali ekugqibeleni lathetha intliziyo yam. " Ezi zicatshulwa zibonisa uhambo olubonakalayo u-Angelou uguqulwe kwixhoba lokudlwengula kunye nokucwasana ngokobuhlanga ukuya kwintombi ehloniphekileyo.
Kule ncwadi, umlingiswa ka-Angelou, uMaya, "uhambelana neempembelelo zobuhlanga kunye nokwahlukana eMelika ngokusemncinane," ngokutsho kweSparkNotes. Ubuhlanga kunye nokuxhatshazwa kweembambano ziyihloko eziyinhloko kwincwadi, njengoko ezi zilandelayo zicacisa.
"Ukuba ukukhula kubuhlungu kwintombazana yaseMzansi yaseMzantsi, ukuqonda ukufuduka kwayo yinkanuko kwiloyi esongela umqala." - Ingxelo
"Ndiyakhumbula ndingazange ndikholelwe ukuba abamhlophe babenene ngokwenene." - Isahluko 4
"Abayithandi ngokwenene." Abasenalo. - Isahluko 25
"Yeka indlela ekumangalisa ngayo ukuba uzalwe kwintsimi yekotoni kunye nezifiso zobungangamsha." - Isahluko 30
U-Angelou - kunye nomdlali wakhe wencwadi kwincwadi, uMaya - "wakhuliswa ngoluvo olunzulu lwenkolo, olusebenza njengesikhokelo sakhe sokuziphatha," ngokutsho kweBakalaSaver. Yaye loo nqulo yonqulo neyokuziphatha ihamba phambili kwiveli.
"Ndayazi ukuba ukuba umntu wayefuna ukunqanda isihogo nesulfure, kwaye ukugonywa ngonaphakade emlilweni kaMtyholi, konke ayekumele akwenze kwakukhumbuza iDuteronomi kunye nokulandela imfundiso yayo, igama ngelizwi." - Isahluko 6
Yabona, akudingeki ucinge ngokukwenza into efanelekileyo. Ukuba ulungele into efanelekileyo, ngoko uyakwenza ngaphandle kokucinga. "- Isahluko 36
Inkcazo kwiphepha elingemuva le-2015 leveli, inqaku lokuba le ncwadi "ithatha inzondelelo yabantwana abaseseyodwa, ukuhlambalaza ngokugqithisileyo, kunye nokumangalisa kwamagama anokulungisa izinto." Mhlawumbi ngaphezu kwayo nayiphi na into, kungamandla wamagama ka-Angelou-kwaye ugxininiso lwakhe ekuqondeni-oluye lunceda ekukhanyeni ukunyaniseka kwezinto ezinzima zobuhlanga kunye nobuhlanga.
"Ulwimi lendlela yendoda yokuthetha nomntu kunye nolwimi kuphela oluhlula kuye kwizilwanyana eziphantsi." - Isahluko 15
"Lonke ulwazi luyimali echithayo, kuxhomekeka kwiimarike." - Isahluko 28
Inveli ibandakanya iminyaka ukususela xa uMaya u-3 ade aphendukele. Ininzi yale ncwadi yenzelwe umzamo kaMaya wokujongana nokuxhatshazwa nokuhlaziywa. Ekugqibeleni, nangona, ngasekupheleni komnumzana naye ubona uzuko ngokuzinikela-ukunika xa - xa kuyimfuneko.
"Njengabantwana abaninzi, ndacinga ukuba ndijamelana nobungozi obubi ngokuzithandela, kwaye ndisoyisa, ndiza kuba namandla phezu kwayo." - Isahluko 2
Ubomi bufuna ukulinganisela. Kulungile ukuba sisenza ukuphanga ngoku. " - Isahluko 29
Ubomi obushumi elinantlanu bendifundise ngokungenakuphika ukuba ukuzinikela, endaweni yayo, kwakunokuhlonipha njengento yokumelana, ngakumbi ukuba umntu akanakukhetha. " - Isahluko 31
Kumzekeliso wenveli-kunye nehlabathi elikujikelezayo-uMaya uhambela edolophini ngobusuku obubodwa aze anqume ukulala emotweni kwi-junkyard. Ngomso kusasa uvuka ukuze athole iqela leentsha, ezibandakanya iintlanga ezininzi, zihlala e-junkyard, apho zihamba khona kwaye zizonke izihlobo ezilungileyo.
"Andizange ndiphinde ndizibonele ukuba ndizingqongqo ngaphandle kwebala eluntwini." - Isahluko 32
Iimpawu eziMnandi ngabantu
'Isipho seMagi' Quotes
Ukubaluleka kokutyelela kwiCawa okanye kwiNkundla yokuSondeza yonke imihla yoMoya
Indlela yokudibanisa "i-Influencer" (Ukuthintela) ngesiFrentshi
Omnyama, Olubomvu, kunye neGolide: Imvelaphi yesiBheno seSizwe saseJamani
Ukuhlaziywa: iFuzion Touring